China YF-T19 Black N'ogige atụrụ na-elu mirror Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-T19 Black N'ogige atụrụ na-enyo
N'elu nwere uzo ato nwere enyo na-atụnye-elu na ngalaba nke etiti. Mpempe akwụkwọ tụgharịrị n'akụkụ ọ bụla nke ihe efu na-enye ọtụtụ ohere iji chekwaa etemeete ma ọ bụ ụlọ mposi ndị ọzọ.
IHE: elu gloss MDF osisi + gold plating igwe anaghị agba nchara
Isiokwu oge 1100mmL x410mmW x760mmH
The efu set okokụre ke pụtara gold, ọ na-aga nke ọma na elu gloss balck table top na akpụkpọ anụ upholstery.
Mere si engineered osisi na gold plating igwe anaghị agba nchara
Ọmarịcha ụdị na mpụta pụrụ iche na-eweta ahụmịhe na-enye ume ọhụrụ na ime ụlọ gị.
Ọ dị mfe ịgbakọta, ngwá ọrụ na ntụziaka gụnyere: assemblyfọdụ mgbakọ dị mfe achọrọ site n'ịgbakwunye ụkwụ na stool na tebụl, yana ịgbakọta enyo na itinye nke ahụ. Akụkụ na ntuziaka niile gụnyere na tebụl etinyere etolite a.
enweghi ike ighe okpokoro efu dika tebulu etemeete ya na enyo di n’elu, ma jeekwa oru dika onye nchikota oru nchekwa di uku nke nwere otutu ebe nchekwa na kwa dika okpokoro ofeke. Ọdịdị tụgharịa arụmọrụ na-eme ka ọ dị mma iji, nke ejiri ndị nhazi nchekwa nkewa. Can nwere ike itinye misc obere ihe dị iche iche. Ọ dị oke ọrụ ma baa uru idobe ihe gị niile ọcha.
Nnukwu Ugwu Na-enyo enyo, nke na-enyere gị aka ile ihu gị ma ọ bụ ntutu gị site n'akụkụ dị iche iche, na-echekwa oge etemeete
Nchekwa ejiji, tebụl buru ibu na drọwa abụọ na-enye gị ohere zuru oke iji jide ọla ịchọ mma gị, ihe ịchọ mma, ngwa ntutu, mbọ aka, ịchekwa etemeete nke ọma.
Nhọrọ kacha mma: A ga-eji okpokoro efu a na oche oche gị mee ụlọ ihi ụra, ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ ma ọ bụ paseeji. Cushioned oche na-enye gị ala ọnọdụ ime gị etemeete na ntutu. Zuru oke ịhọrọ ụmụ agbọghọ ụmụ nwanyị nwanyị dị ka onyinye!
Nke gara aga: YF-T18 na-enye gị ohere oghere velvet efu
Osote: YF-T20 Nnukwu ihe etemeete efu + TV guzo kabinet
Omuma Uwe eji ejiji
Uwe eji ejiji ugbu a Mirror
Uwe eji ejiji na enyo
Isiokwu eji ejiji
Efu Set Dressing Isiokwu etemeete
YF-T24 ọla kabinet ime ụlọ uzo
YF-S1 Oak kọmpat Efu Isiokwu
YF-T12 Dobe-ala tree-emeghe ka nchekwa dresser
Tụgharịa Top Mirror Igbe ọla Cabinet White